Madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay Garoowe, xilli wadooyinka la xiray - Awdinle Online
Madaxweynaha Puntland oo dib ugu laabtay Garoowe, xilli wadooyinka la xiray
Wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Maanta dib ugu laabtay Magaalada Garoowe ee Caasimadda Puntland, iyada oo siweyn loo soo dhaweeyay.
Madaxweyne Deni oo kasoo ambabaxay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa Maanta ka duwaneyd sidii loo soo dhaweyn jiray, waxaana garoonka Garoowe ku sugnaa Boqolaal ruux oo isugu jiray mas’uuliyiin iyo Shacab ah.
Sidoo kale Ciidamada Ammaanka ee Magaalada Garoowe ayaa Maanta markii ugu horreysay soo dhaweyeta Deni u xiray inta badan wadooyinka Magaalada Garoowe, isla markaana loo diidayay dadka iyo gaadiidka inay isticmaalaan.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi deni ayaa muddo 45 Cisho ka badan ka maqnaa degaannada puntland, waxaa uu Muqdisho uga qeyb-galay shirkii lagu gaaray heshiiskii doorashada, waxaana uu safar ku tegay dalka Kenya, isaga oo uga sii gudbay wadanka Imaaraadka Carabta. Balse markale uu dib ugu soo laabtay Kenya, hayeeshee ugu dambeyn uu Maanta tegay Magaalada Garoowe.
Previous articleGuddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka oo gaaray Baydhabo (Akhriso u jeedka)
Next articleDhimasho & dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay Shabeellaha Dhexe